Adobe Photoshop Express waxaa lagu cusbooneysiiyay istiikarada iyo saameynta cillad cusub | Abuurista khadka tooska ah
Adobe Photoshop Express wuxuu ku daraa istiikarada, waxyeelada cilladaha iyo waxyaabo badan oo nooc cusub ah
Adobe Photoshop Express cusbooneysiinta leh istiikarada, saameynta cilladda iyo silsilado kale oo ugub ah oo loogu talagalay barnaamijka moobiilka oo ka gudbay tirada 100 milyan oo soo degsasho ah. Kumaa ka fikiri lahaa dhowr sano ka hor inaan abuuri karno oo aan tafatiri karno shaxanka moobiilka iyadoo aan loo baahnayn inuu maro kombiyuutar.
Riwaayadahaas waxaa ka mid ah istiikarada si aan u aragno, inbadan haddii ay suurta gal tahay, sawiradaas iyo sawiradaas waxaan u geyn doonnaa shabakadaha bulshada ee kala duwan ama in ay musbaar dul dhigi doonaan shaqo gaar ah. Waxaad ka heli kartaa qaybaha sida jacaylka, tacaburka, guridda iyo kuwo kaloo badan.
Marka laga reebo istiikarada leh dhamaan sawiradaas madadaalo ee kala duwan, Adobe Photoshop Express waxaa ku jira muuqaal kale oo Baadhitaan cusub. Runtii waxa ay qabato waa u ekeysii diirad jilicsan bannaanka gacan-yaraha isticmaale qeexey Maaha inay tahay wax cusub, maadaama barnaamijyada kale ee naqshadeynta, sida Pixlr, muuqaalkan uu jiray muddo.
Iyo mid ka mid ah riwaayadihii sida ugu wanaagsan noogu imaan kara daqiiqado cayiman oo aan ku wadaagno sawir aan soo qaadnay. Awoodda xulo tayada sawirka in aan keydino ama aan dhoofino. Waxay noqon doontaa markaan dhoofino faylka JPEG markaan dooran karno inta udhaxeysa shan heer oo horay loo qeexay, ama aan u adeegsano slider-ka si aan u habeeyno tayada sawirka.
Sida cusbooneysiinta kale, Adobe Photoshop Express waxaa ka mid ah hagaajinta cilladaha caadiga ah ee barnaamijka yaa wax walba siinaya in la dareemo oo inta hartay tartanka dhulka ku daayo. Waxaan ka hadleynaa VSCO, Snapseed iyo kuwa kale oo badan oo tayo sare leh oo sii wadaya hagaajinta si loo isku dayo in aan loo fududeynin barnaamijka Adobe.
By habka, maalmo kahor waxaan baranay dhamaan wararka laxiriira Adobe Acrobat DC y habkaas cusub ee lagula shaqeynayo faylasha PDF. Adobe aan joojinaynin siinta tayada dhammaan xalalka naqshadeynta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Adobe Photoshop Express wuxuu ku daraa istiikarada, waxyeelada cilladaha iyo waxyaabo badan oo nooc cusub ah
Noocyada ugu sareeya ee 100 ee 2018 ayaa shaaca laga qaaday